ဆင်မြူရယ် ဂင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ Sky Festival ပွဲတွင် အစမ်းလေ့ကျင့်နေသော ဆင်မြူရယ်
ဆင်မြူရယ် ဂင် အာရီဒန်ဒို
(၂၀၀၂-0၁-၁၇) ဇန်နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၂ (အသက် ၁၉)
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ
Samuel Kim Arredondo (၂ ဝဝ ၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၇ တွင်မွေးဖွားသည်) သည်အမေရိကန်ဖွားတောင်ကိုရီးယားအဆိုတော်ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၁၅ 1Punch hip hop duo တွင်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ 2017ပြီလတွင်သူသည် Produce 101 Season2TV show တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အဆင့် ၁၈ တွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင်တစ်လအကြာဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင်သူ၏တစ်ကိုယ်တော်ကစားဆယ့်ခြောက်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ရှမွေလကိုမက္ကဆီကို - အမေရိကန်ဖခင်José Arredondo နှင့်တောင်ကိုရီးယားမိခင်မှမွေးဖွားခဲ့သည်။.
၂.၃ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈
၃.၂ Extended plays
၄.၁ Reality shows
၅ ဆုများနှင့် ဆန်ကာတင်များ
ဆင်မြူရယ်ကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် မက္ကဆီကန်-အမေရိကန်နွယ်ဖွားအဖေ ဂျိုဆဲ အာရီဒန်ဒိုနှင့် တောင်ကိုရီးယားသူအမေတို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဆင်မြူရယ်သည် အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ်တွင် Pledis Entertainment ၏ Seventeen TV တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်တွင် ပထမဆုံး ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ထို အေဂျင်စီမှ ထွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဆင်မြူရယ်သည် Brave Entertainment နှင့် D-business Entertainment တို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းသော hip hop duo အဖွဲ့ 1Punch တွင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆင်မြူရယ် သည် ထိုအဖွဲ့တွင် PUNCH အမည်ဖြင့် ထင်ရှားသည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၃ တွင် ထိုအဖွဲ့၏ "Turn Me Back" သီချင်းထွက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းသည် ၎င်းတို့၏ "The Anthem" အယ်လ်ဘမ် ၏ သီချင်းခေါင်းစဉ်လည်းဖြစ်သည်။ ဆင်မြူရယ်သည် PUNCH အမည်ဖြင့် Silentó နှင့် ပူးပေါင်းကာ "Spotlight" single တစ်ပုဒ်ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းနှင့် 26th Seoul Music Award for Global Collaboration ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၇ ဧပြီလတွင် ဆင်မြူရယ်သည် Produce 101 Season2ကို ၎င်း၏ နာမည်အရင်းဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲတွင် ၎င်းသည် အဆင့်၂ ရခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင် ဆင်မြူသည် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ယောက်ပါသော အဖွဲ့မှ ထွက်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် တစ်ဦးတည်း အဆင့် ၁၈ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆင်မြူရယ်သည် ဩဂုတ်၂ ရက်နေ့တွင် တစ်ကိုယ်တော်အနုပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ဩဂုတ် ၂ရက်နေ့တွင် ၎င်း၏ အယ်လ်ဘမ်ငယ် "Sixteen" ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုသီချင်း၏ rapper မှာ ချန်မို ဖြစ်သည်။ ဆင်မြူရယ်သည် နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ တွင် ၎င်း၏ အယ်လ်ဘမ် "Eye Candy" ကိုထွက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်တွင် သီချင်း ၁၀ ပုဒ်ပါဝင်ပြီး "Candy" သီချင်းလည်းပါဝင်သည်။ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဂျပန် ပရိုမိုးရှင်း "Pony Canyon" အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈ တွင် ဂျပန်ဗားရှင်း "Sixteen" ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၈ တွင် "Sixteen(Japanese Version)" သီချင်းဗီဒီယို ထွက်ရှိခဲ့သည်။ မတ်လ ၂၀၁၈ တွင် ၎င်း၏ အယ်လ်ဘမ်ငယ် "One" ကို BtoB အဖွဲ့ဝင် ဂျောင်အယ်ဟွန်း (featuring) နှင့် အတူ ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ဆင်မြူရယ် သည် ၎င်း၏ ဒုတိယ ဂျပန်ဗားရှင်း သီချင်း "Candy" ကို မေ ၁၆ တွင် ထွက်ရှိနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ထိုသီချင်း၏ သီချင်းဗီဒီယို ကို မေ ၂ တွင်ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ မေလ အစောပိုင်းတွင် ဆင်မြူရယ်သည် ၎င်း၏ "Teenager" အယ်လ်ဘမ်ကို မေ ၃၀ တွင် ထွက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်၏ featuring အဆိုတော်မှာ လီရိုဟန် ဖြစ်သည်။
ထွက်ရှိသည့်နေ့ : နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇
Label: Brave Entertainment, LOEN Entertainment
ပုံစံ : CD, digital download
ထွက်ရှိသည့်နေ့: ဩဂုတ် ၂၊ ၂၀၁၇
With U (feat. Kim Chung-ha)
123 (feat. Maboos)
ထွက်ရှိသည့်နေ့ : မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၈
ONE (Feat. 정일훈 of BTOB)
잠시만 (Just A While)
ပြန်လည်ထွက်ရှိသည့်နေ့ : မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈ (Teenager)
Label: Brave Entertainment, Kakao M
Teenager (feat. Lee Ro Han)
Kka Kka (feat. Maboos)
One (feat. Jung Il-hoon of BtoB)
"Spotlight" (with Silentó)
၂၀၁၆ — N/A N/A Non-album single
"Sixteen" (feat. Changmo)
— N/A Eye Candy
၂၀၁၈ — N/A Non-album single
"One" (feat. Jung Il-hoon of BtoB)
— N/A One
"Teenager" (feat. Lee Ro Han)
"Archive People" (with Brave Hongcha)
၂၀၁၉ — N/A Non-album single
၂၀၁၈ N/A 19
Say you love me (좋아한다 말해) ၂၀၁၇ Pink Pink OST Kriesha Chu 
Thousand Times ၂၀၁၈ Cross OST N/A 
Time to Shine ၂၀၁၈ Sweet Revenge2OST Bigstar Feeldog 
"CHANEL BAG" (샤넬백) ၂၀၁၆ SUNGLASSES ELECTROBOYZ 
၂၀၁၂ Made In U JTBC ပြိုင်ပွဲဝင်
၂၀၁၇ Produce 101 Season2Mnet ပြိုင်ပွဲဝင်
Leaving The Nest2tvN သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်
Photo People Naver သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်
၂၀၁၈ The Collaboration Season2Tencent ပြိုင်ပွဲဝင်
၂၀၁၈ Sweet Revenge2ဆိုရိုဘင် XtvN ဇာတ်ဆောင်
၂၀၁၇ 26th Seoul Music Awards Global Collaboration Award "Spotlight" with Silentó ဆုရရှိ
19th Mnet Asian Music Awards Best New Male Artist Kim Samuel ဆန်ကာတင်
Artist of the Year ဆန်ကာတင်
Yahoo! Asia Buzz Awards  Most Searched KR New Singer ဆုရရှိ
၂၀၁၈ 32nd Golden Disk Awards New Artist of the Year ဆန်ကာတင်
Global Popularity Award ဆန်ကာတင်
27th Seoul Music Awards Bonsang Award ဆန်ကာတင်
Popularity Award ဆန်ကာတင်
Hallyu Special Award ဆန်ကာတင်
Soribada Best K-Music Awards New Hallyu Performance Award ဆုရရှိ
↑ Gaon Album Chart (in ko)။ September 22, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Eye Candy (November 12–18, 2017)။
↑ Cumulative sales for Eye Candy:
2017년 11월 Album Chart (See #15) (in Korean)။ Gaon Music Chart။ Korea Music Content Industry Association။
Sixteen (July 30 - August 5, 2017)။
One (March 25–31, 2018)။
Teenager (May 27 – June 2, 2018)။
↑ Cumulative sales for Sixteen:
2017년 08월 Album Chart (See #12) (in Korean)။ Gaon Music Chart။ Korea Music Content Industry Association။
↑ Cumulative sales for ONE:
2018년 04월 Album Chart (See #42) (in Korean)။ Gaon Music Chart။ Korea Music Content Industry Association။
2018년 05월 Album Chart (See #33) (in Korean)။ Gaon Music Chart။ Korea Music Content Industry Association။
↑ Gaon Digital Chart (in Korean)။ September 22, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Samuelの作品 (in Japanese)။ Oricon။ January 21, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2017년 31주차 Download Chart (in ko)။ September 22, 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ September 22, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CD single weekly ranking from February 5, 2018 to February 11, 2018 (in Japanese)။ Oricon။ February 14, 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 14, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CD single weekly ranking from May 14, 2018 to May 20, 2018 (in Japanese)။ Oricon။ May 23, 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "코미카 웹툰 '분홍분홍해' OST 선봬" (in ko)၊ 더게임스၊ 2017-12-27။
↑ CJENMMUSIC Official (2018-02-12)၊ [크로스 OST Part 2] 사무엘 (Samuel) - Thousand Times MV၊ 2018-04-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ "사무엘 (Samuel, 김사무엘) on Twitter" (in en)၊ Twitter။
↑ "Sunglasses ELECTROBOYZ" (in en)၊ iTunes၊ ၂၀၁၆-၇-၃၀။
↑ "On December 6, Samuel Kim attended the '2017 Yahoo Asia Buzz Awards' in Hong Kong, accepting the award for the 'Most Searched KR New Singer". Retrieved 2017-12-06.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆင်မြူရယ်_ဂင်&oldid=676885" မှ ရယူရန်
တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသား အဆိုတော်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။